मोदीको सपथ ग्रहणमा ओलीलाई निम्ता, बिहीबार दिल्ली जाने . | संस्कार एफ.एम.
Home मुख्य समाचार मोदीको सपथ ग्रहणमा ओलीलाई निम्ता, बिहीबार दिल्ली जाने .
मोदीको सपथ ग्रहणमा ओलीलाई निम्ता, बिहीबार दिल्ली जाने .
१४ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुने भएका छन् । सोमवार भारतबाट औपचारिक निम्ता आएपछि प्रधानमन्त्री ओली सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन दिल्ली जाने तय भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार ओली जेठ १६ गते दिल्ली जानेछन् । सोही दिन मोदीको सपथग्रहण छ । ओली सपथग्रहण र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्तापछि जेठ १७ गते नै स्वदेश फर्किनेछन् । मोदीको सपथग्रहण समारोहमा विमस्टेक राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुख
लाई बोलाइएको छ ।